Isku aadka Kulankii ugu horreeyey ee siddeed dhammaadka Europa League oo la ogaaday & Manchester United oo la ciyaareysa… – Gool FM
(Manchester) 06 Agoosto 2020. Kulammo ka tirsan wareegga 16-ka Europa League ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo uu ka soo baxay isku aadka kulankii ugu horreeyey ee siddeed dhammaadka tartankan.
Manchester United ayaa la xaqiijiyey inay Isniinta soo aaddan la ciyaarto Copenhagen kulan ka tirsan siddeed dhammaadka Europa League, maadaama labo todobaad la doonayo in lagu soo gabagabeeyo tartankan.
Kaddib markii Inter ay xalay tartanka ka reebtay kooxda Getafe, halka Manchester United ay reebtay LASK, waxa ay wareegga siddeed dhammaadka Europa League kula biireen Copenhagen iyo Shakhtar.
Kooxda reer England ee Manchester United ayaana siddeed dhammaadka tartankan la ciyaaraysa Copenhagen, kuwaasoo soo garaaday Basaksehir, isla markaana noqday kooxdii ugu horreysay ee Danish ah oo heerkaan ka gaarta tartankan.
Dhinaca kale labada kooxood ee kale waa Inter iyo Shakhtar waxa ay sugayaan kulammada kale ee caawa la ciyaarayo Europa League si ay u ogaadaan kooxaha ay ku aadeen siddeed dhammaadka tartankan.